दिनप्रति दिन किन घाटामा गैरहेको आयल निगम ? मासिक घाटा ६४ करोड — Motivatenews.Com
दिनप्रति दिन किन घाटामा गैरहेको आयल निगम ? मासिक घाटा ६४ करोड
भदौ १८, काठमाडौं – नेपाल आयल निगमले एक महिनामा करिब ६४ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको छ। पछिल्लो समय अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुने क्रम सुरु भएपछि निगमको घाटा चुलिँदै गएको छ। यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य वृद्धि हुँदा निगमलाई थप असर परेको हो।
मेगा बैंकले सुरु गर्यो अत्याधुनिक भर्चुअल सहायता सेवा